ဒီခတျေမှာ အပြိုစငျစဈ အခဈြကို တနျဖိုးထားတဲ့ မိနျးကလေးတှေ ရှိသေးလား ?
ရှိရငျ ထိုငျပီး ကနျတော့မလို့ မေးပွီး ကိုယျတိုငျက ဖြာတနျးက မထှကျတဲ့ ကောငျတှေ.. အပြိုလေး မွငျလညျး အပြိုစဈစဈ ဘယျမွငျမလဲ။ ငါယောကျြားပဲ နဈနာစရာ အကွောငျး မရှိဘူး ထငျနရေငျတော့ အကငျြ့တှေ ပွို အတှေးတှေ ပွို အမွငျတှေ ပွိုတော့.. ဦးနှောကျ အသိစိတျပါ ပွိုကုနျရော ။
ကိုယျယူမယျ့ မိနျးမကတြော့ အပြိုစဈစဈ ဖွဈရမယျ ဆိုတဲ့ စံအဖွဈ သတျမှတျထားကွတယျ မဟုတျလား ။ ကိုယျမယူတဲ့ မိနျးမကတြော့ အပြိုရညျ ပကျြပကျြပေါ့ ဆိုတဲ့ အောကျတနျးကတြဲ့ စိတျဓာတျတှေ ရှိမနသေငျ့ဘူး။
အဲ.. ရှိခဲ့တယျ ဆိုရငျတော့ ကိုယျဟာကိုယျ ပွနျငုံ့ကွညျ့ပါ ။ အခု ဒီဘဝအတှကျ မွငျ့မွတျလှတဲ့ ယောကျြားဘဝ ရခဲ့ပမေယျ့ နောငျဘဝ ဆိုရငျတော့ ဘယျလို ဘဝမြိုး ရောကျနိုငျတယျ ဆိုတဲ့ အတှေးလေးတှေ ဝငျကွညျ့လိုကျပါ။
ဘယျခတျေပဲ ရောကျရောကျ ယောကျြားမှနျရငျ အပြိုစဈစဈပဲ ပိုငျဆိုငျခငျြကွတယျ မဟုတျလား။ ဒါဆိုရငျ ဆန်ဒကို သိက်ခာနဲ့ ထိနျးပေါ့ ။ ခဈြတယျ ဆိုတဲ့ စကားလှလှလေး သုံးပွီး မိနျးမ တဈယောကျရဲ့ အခဈြနဲ့ ဘဝကို လကျမထပျရသေးခငျ မယူနဲ့ပေါ့ ။
မိနျးမ တဈယောကျရဲ့ အရှကျနဲ့ သိက်ခာကို စျောကားမယျ ဆိုရငျ အရငျဆုံး ကိုယျအမေ အဈမ နှမမကျြနှာကို ပွေးမွငျကွညျ့ လိုကျပါ ။ ဝဋျကတော့ နောငျဘဝ မကူးဘူး ထငျပါတယျ ။
ဒီခေတ်မှာ အပျိုစင်စစ် အချစ်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ရှိသေးလား?
ရှိရင် ထိုင်ပီး ကန်တော့မလို့ မေးပြီး ကိုယ်တိုင်က ဖျာတန်းက မထွက်တဲ့ ကောင်တွေ.. အပျိုလေး မြင်လည်း အပျိုစစ်စစ် ဘယ်မြင်မလဲ။ ငါယောက်ျားပဲ နစ်နာစရာ အကြောင်း မရှိဘူး ထင်နေရင်တော့ အကျင့်တွေ ပြို အတွေးတွေ ပြို အမြင်တွေ ပြိုတော့.. ဦးနှောက် အသိစိတ်ပါ ပြိုကုန်ရော ။
ကိုယ်ယူမယ့် မိန်းမကျတော့ အပျိုစစ်စစ် ဖြစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ စံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြတယ် မဟုတ်လား ။ ကိုယ်မယူတဲ့ မိန်းမကျတော့ အပျိုရည် ပျက်ပျက်ပေါ့ ဆိုတဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ရှိမနေသင့်ဘူး။
အဲ.. ရှိခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဟာကိုယ် ပြန်ငုံ့ကြည့်ပါ ။ အခု ဒီဘဝအတွက် မြင့်မြတ်လှတဲ့ ယောက်ျားဘဝ ရခဲ့ပေမယ့် နောင်ဘဝ ဆိုရင်တော့ ဘယ်လို ဘဝမျိုး ရောက်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အတွေးလေးတွေ ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။
ဘယ်ခေတ်ပဲ ရောက်ရောက် ယောက်ျားမှန်ရင် အပျိုစစ်စစ်ပဲ ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတယ် မဟုတ်လား။ ဒါဆိုရင် ဆန္ဒကို သိက္ခာနဲ့ ထိန်းပေါ့ ။ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလှလှလေး သုံးပြီး မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်နဲ့ ဘဝကို လက်မထပ်ရသေးခင် မယူနဲ့ပေါ့ ။
မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ အရှက်နဲ့ သိက္ခာကို စော်ကားမယ် ဆိုရင် အရင်ဆုံး ကိုယ်အမေ အစ်မ နှမမျက်နှာကို ပြေးမြင်ကြည့် လိုက်ပါ ။ ဝဋ်ကတော့ နောင်ဘဝ မကူးဘူး ထင်ပါတယ် ။